Te hamono ny bokotra Bixby amin'ny Samsung? Araho ireto dingana ireto | la-manette.com
Te hamono ny bokotra Bixby amin'ny Samsung? Araho ireto dingana ireto
3 février 2021 feh Claude henrichon
Araka ny hevitry ny besinimaro, misy fampiharana mpanampy feo tsara kokoa noho ny Samsung Bixby.
Rehefa nanampy bokotra Bixby natokana ho an'ny S8 i Samsung, ny tanjona dia ny handresy lahatra ny mpampiasa hampiasa Bixby fa tsy ny Google Assistant. Bixby dia nihatsara nandritra ny taona maro, fa ny mpampiasa Samsung sasany dia mbola tia ny mpanampy AI an'ny Google.
Taorian'ny fahatongavan'ny bokotra Bixby, Samsung dia niatrika fanoherana avy amin'ireo mpampiasa izay nitaraina noho ny fanindriana tsy nahy ny bokotra. Ny olana lehibe amin'ny lakile Bixby dia ny fametrahana azy eo ambanin'ny bokotra volume, ka mahatonga azy ho mora amin'ny fanerena tsy nahy.
Talohan'ny Samsung S10, ny mpampiasa dia tsy nanana safidy hanokafana ny fanalahidy hanokafana Google Assistant na fampiharana hafa. Na izany aza, tsy ela taorian'izay, Samsung dia namoaka Bixby Button, ny fampiharana Assistant Remapper izay ahafahan'ny mpampiasa mamerina ny fanalahidin'ny Bixby ary mampiasa azy io hanokatra fampiharana hafa.
Ho an'ny finday S-series sasany, Samsung dia tsy nanome safidy hanesorana ny bokotra Bixby, fa azonao atao foana ny mamerina ny bokotra hanombohana fampiharana hafa na hanao hetsika hafa.
Na dia nesorin'i Samsung aza ny bokotra Bixby natokana sy ny fampidirana azy ao amin'ny bokotra herinaratra, manomboka amin'ny andiany Galaxy Note 10, dia mbola misy io endri-javatra io amin'ny fitaovana taloha. Ho an'ireo mpampiasa ireo, ity no fomba hanesorana ny Bixby amin'ny fiainany andavan'andro.
mifandraika : Ahoana ny fampiasana Facer ho an'ny Apple Watch sy Samsung Galaxy smartwatches?
Fanamarihana: Alohan'ny hanohizana, midira ao amin'ny kaontinao Samsung amin'ny alàlan'ny fandehanana any amin'ny fizarana "Accounts & Backup" amin'ny app Settings.
"Ahoana no ahafahako manala ny Bixby?" Torolalana
Nahoana ianao no te-hanafoana ny Bixby?
Ahoana ny fomba hamonoana ny endri-javatra “Hi, Bixby”?
Ahoana ny fomba famonoako ny Bixby Home?
Hanova ny firafitry ny lakile Bixby (Android 9 na vaovao)
Ahoana ny fomba hamonoana ny Bixby amin'ny fahitalavitra Samsung anao?
Misy antony maromaro mety haniry hanesoranao an'i Bixby. Ny iray amin'ireo dia ny toeran'ny bokotra Bixby amin'ny telefaona taloha, toa ny Galaxy S10 +, izay manakaiky ny bokotra volume. Matetika izany dia mitarika ny mpampiasa hanakorontana ny bokotra Bixby amin'ny bokotra herinaratra ary manindry azy tsy nahy. Ny fahita voajanahary amin'ity hadisoana ity dia antony ampy hanesorana ny fiasan'ny bokotra Bixby.
Vakio ihany koa: Ahoana ny fomba hahazoana ny mpanampy virtoaly Samsung? Mpanampy virtoaly vaovao ve i Sam Samsung?
Amin'ny telefaona vaovao, toa ny Galaxy Note 10, nesorin'i Samsung ity bokotra ity mba hisorohana ny fisafotofotoana. Ho an'ny finday sasany, ny fanindriana lava ny bokotra herinaratra dia manetsika ny Bixby. Ity hetsika ity dia mety tsy mahazatra ho an'ireo izay zatra mahita ny menio herinaratra amin'ny fanindriana ela ny bokotra herinaratra. Noho izany, mety te hamono azy tanteraka izy ireo.
Raha heverinao fa tsy mandà an'i Bixby ianao ary faly rehefa avy nampiana fifaneraserana manokana vitsivitsy, dia misy fitaovana Bixby Developer Studio azonao ampiasaina.
mifandraika : Ny hevitray momba ny famantaranandro mifandray Samsung Galaxy Watch Active2 -
Ahoana ny fomba famonoako ny fiasa "Hi, Bixby"?
Na dia tena ilaina aza ny endri-javatra "Hi, Bixby", tsy ny rehetra no mpankafy azy. Maro no tia manome baiko feo amin'ny fampiharana hafa. Amin'ity tranga ity, azonao atao ny mamono ny baiko feo "Hi, Bixby". Toy izao ny fomba hanaovana azy:
Sokafy ny rindranasa Bixby ary tsindrio ny kisary sakafo hamburger eo amin'ny zoro havia ambony.
Tsindrio ny bokotra Settings (kisary fitaovana) eo akaikin'ny tampony.
Safidio ny "Feo mifoha".
Tsindrio ny famantaranandro fanairana miaraka amin'ny fikandrana "Hi, Bixby" hamonoana ilay endri-javatra.
Raha hanesorana ny Bixby Home amin'ny efijerinao, araho ireto dingana manaraka ireto:
1. Tsindrio ary hazòny izay toerana tsy misy na inona na inona eo amin'ny efijery an-tranonao.
2. Swipe miankavanana dia ho hitanao ny tontonana Bixby Home.
3. Atsaharo ny bokotra toggle eo akaikin'ny Bixby Home.
Teo no vita. Efa nesorinao ny Bixby Home amin'ny findainao. Ity fomba ity dia miasa amin'ny fitaovana andiany S rehetra sy andiany Note avy amin'ny S8 sy Note 8.
Ahoana ny fomba hamonoana ny bokotra Bixby?
Satria tsy nanome safidy hanesorana tanteraka ny bokotra Bixby ao amin'ny OneUI i Samsung, ny ambony indrindra azonao atao dia ny manitsy ny fikandrana ary mamerina ny bokotra mba tsy hisy na inona na inona mitranga rehefa manindry ilay bokotra ianao. Azonao atao ny manova ny fanovana mba hivoahan'ny Bixby rehefa manindry indroa ny bokotra voatokana.
Vakio ihany koa: Ny leaks rehetra an'ny Fortnite Skins sy ny kosmetika hafa hita ao amin'ny fanavaozana v18.40
Izany dia hanakana ny Bixby tsy hivoaka amin'ny alàlan'ny fanindriana tsy nahy ny bokotra Bixby rehefa diso ny bokotra midina ny feo.
1. Sokafy ny app Settings, midira midina ary tsindrio ny "Advanced Features".
2. Tsindrio ny safidy "Bixby Key".
3. Safidio ny "Double tap hanokatra Bixby" ary avelao ny safidy "Ampiasao ny paompy tokana" tsy voamarika.
4. Azonao atao ihany koa ny mamerina ny bokotra avy amin'ity toe-javatra ity mba hampiasana fanindriana tokana hanokafana ny rindranasa tianao na hampavitrika ny baiko Run quick mba hanaovana hetsika fanampiny. Azonao atao ny misintona ny rindranasa Bixby Button Assistant Remapper mba hamerenana ny bokotra Bixby ho an'ny asa hafa.
Voafehinao soa aman-tsara ny bokotra Bixby. Ankehitriny raha manindry ny bokotra indray mandeha ianao dia tsy hisy hitranga.
Raha te hanaisotra tanteraka ny bokotra Bixby ianao ary tsy ilaina dia azonao atao ny mampiasa fampiharana an'ny antoko fahatelo toy ny bxActions. Raha tsy izany, azonao atao koa ny mampiasa rindranasa mpandefa hafa mba hamonoana ny Bixby. Na izany aza, ny fomba voalaza etsy ambony dia ampy hisorohana ny Bixby tsy hipoitra amin'ny efijery noho ny fanindriana tsy nahy ny bokotra Bixby.
mifandraika : Fomba 7 haka sary amin'ny Android (anisan'izany ny Samsung Galaxy)
Hanova ny firafitry ny lakile Bixby (Android 9 na vao haingana)
Satria tsy azonao vonoina ny Bixby Key amin'ny fitaovana mandeha amin'ny Android 9 na vao haingana, dia tsy maintsy mampiasa fanovana ianao. Ity misy torolàlana momba ny fomba hanaovana izany:
Ao amin'ny efijery Bixby, tsindrio ny teboka telo eo amin'ny zoro havanana ambony ary mifidiana Settings.
Tsindrio ny Bixby Key.
Misafidiana eo amin'ny "Top tokana" sy ny "Top roa" hiantsoana an'i Bixby.
Mba hamaritana hetsika mahazatra, ampiasao ny toggle eo ankavanan'ny safidy nofidinao tamin'ny dingana teo aloha.
Safidio ny "Open an app" na "Run a quick command" ary araho ny toromarika eo amin'ny efijery mba hanamboarana azy.
Vakio ihany koa: Ahoana ny fanovana ny adiresy IP an'ny mpanonta anao
Averina indray, na tianao hijanona ho mavitrika i Bixby na tsia dia miankina amin'ny safidinao. Raha mirona kokoa amin'ny fampiasana mpanampy feo mifanentana hafa toa an'i Alexa na Google Assistant ianao, ny fitazonana an'i Bixby ho mavitrika dia tsy mety. Ity ny fomba hamonoana azy amin'ny fahitalavitra Samsung-nao:
Ao amin'ny Samsung TV, sokafy ny Settings.
Safidio ny "General" ary safidio ny "Settings Voice Bixby".
Mandehana mankany amin'ny "Feo mifoha" ary vonoy.
Nahoana no tsy azoko vonoina ny Bixby?
Ho an'ny fitaovana Samsung maro, Bixby dia napetraka ho mpanampy feo mahazatra. Na izany aza, mbola azonao atao ny mamono azy amin'ny alàlan'ny fanovana ny safidy sasany miankina amin'ny fitaovanao.
Inona no mitranga raha "mandeha an-tery" aho Bixby?
Raha "hanery ny fanakatonana" Bixby ianao, dia hifarana ny dingana ary tsy hiasa ao ambadika intsony ny mpanampy amin'ny feon'ny Samsung amin'izao fotoana izao. Na izany aza, raha vao averinao indray ny fitaovanao dia hiverina izy io.
Ahoana ny fomba hamonoana ny fanao Bixby?
Voalohany, swipe midina hidirana amin'ny tontonana fampahafantarana. Avy eo swipe miankavia ary kitiho ny "Bixby Routines" eo ambanin'ny kisary. Avy eo safidio ny "Details" ary tsindrio ny "My Routines". Farany, tsindrio ny toggle hamonoana ny fahazarana tianao.
Afaka manala ny Bixby ve aho?
Indrisy anefa fa tsy afaka manaisotra Bixby amin'ny fitaovanao Samsung ianao. Na izany aza, misy fiovana vitsivitsy, araka ny voalaza ato amin'ity torolàlana ity, izay afaka manampy anao hamono ny fampiasa Bixby.
Web editor Chez ny remote
Claude dia mpanoratra ao amin'ny la-manette.com miorina ao Luxembourg, mitantara lohahevitra toy ny Pokémon, lalao ary fialamboly an-tserasera. Afaka mifandray amin'i Claude Henrichon ianao amin'ny [email voaaro]
Lahatsoratra farany nataon'i Claude Henrichon (jereo ny zava-drehetra)
Lalao tsara indrindra toa an'i Subnautica - 18 Janoary 2022
Lalao tsara indrindra toa ny Pokemon Snap [Lisitra 2022] - 17 Janoary 2022
Lalao tsara indrindra toy ny The Sims - 17 Janoary 2022
Ahoana ny fampidinana Procreate ho an'ny Android sy iPhone maimaim-poana.
Ahoana no ahafahako mamela ny Android Developer Options, USB Debugging, ary OEM Unlock?
Microsoft hividy Activision Blizzard mpanamboatra 'Call of Duty' amin'ny $ 68,7 lavitrisa - National
Xbox hividy Activision Blizzard
Cookie Run: Fanavaozana ny tsingerintaona nahaterahan'ny Fanjakana dia manolotra mofomamy vaovao roa, hetsika an-lalao maro ary rafitra guild vaovao